Fikarohana momba ny firaisana Fiverenana ny fisandratana na ny fiainana an-dalampandrosoana: Ny fasana teraka tao Gorki Charles Parkhurst | Alice Cary | Penney Peirce: Fifandraisana ara-panahy amin'ny toe-javatra iainana taloha - Fikarohana momba ny vatana teraka
Fomba fiaina: Fahitana momba ny fiainana teo aloha nataon'Ilay Fanahy iray
mpikaroka: Penny Peirce
Article amin'ny Walter Semkiw, MD From: ateraka indray ary Fiverenan'ny revolisionera
Fampahafantarana an'i Penney Peirce
Tao amin'ny 1999, dia nanatevin-daharana adihevitra momba ny e-mail aho, antsoina hoe Inpresence, izay ahitana mpanoratra natonta izay mifantoka amin'ny fampivoarana ny hevitra sy lohahevitra mifandraika amin'izany. Tamin'ny fotoana iray dia nandefa e-mail aho nanoritsoritra ny fikarohana momba ny vatana vaovao momba ny vovoka indray ary nanontany aho raha misy olon-kafa fantatry ny vondrona hafa momba ny tranga hafa azoko nodinihina. Ny olona iray namaly azy dia i Penney Peirce, izay nitantara fa nanana tantara taloha izy.
Penney dia profesora manintona, mpanolotsaina, mpampiofana traikefa sy mpampianatra izay miasa manerana an'i Etazonia, Eoropa ary Japana. Izy no mpanoratra Frequency, Ny làlana miavaka: Torolalana ho an'ny miaina amin'ny fahendren'Andriamanitra, Ny fotoana ankehitriny: Diary iray ho an'ny mazava sy ny fahaiza-misaina ary Dreams for Dummies. Nihaona tamin'i Penney tao amin'ny trano fonenany Novato, Kalifornia aho, avaratr'i San Francisco, mba hahalalana bebe kokoa ny momba azy. Aleo hizara ny tantarany aminao.
Penney dia nifindra nanerana ny firenena nihalehibe, miaraka amin'ny fotoana lany any Midwestwest ary ny sasany any amin'ny East Coast. Nifindra avy tany New York City nankany California izy tamin'ny voalohan'ny taona 1970. Niasa ho talen'ny zavakanto orinasa sy mpamorona sary izy, saingy nanohy ny fisaintsainana sy ny fivelaran'ny toetrandro tamin'ny fotoanany, tao amin'ny hetsiky ny fanampiana ny tenany manokana tany California.
Manana seza miaraka amin'ny Trance Medium, Bobby Jo i Penney ary mandray ny fampahalalana momba ny fiainana teo aloha avy amin'ny Fanahy iray na Torolalana ho an'ny Fanahy
Nandritra io vanim-potoana io tamin'ny taona 1970, mpitsidika iray, izay hiantsoako an'i Bobby Jo, no nitsidika matetika ny faritr'i San Francisco Bay. Ao amin'ny asany amin'ny maha-mpanelanelana azy, Bobby Jo dia namela ireo fanahy ara-panahy tsy ara-batana hiteny amin'ny alalany mba hanomezana vaovao amin'ny mpanjifa ny fiainana taloha.
Bobby Jo, izay nijanona tao anatinà toe-draharaha nisaintsaina nandritra ity dingana ity, dia tsy nahatsiaro ny vaovao nampitaina. Ity karazana fandavan-tenan'ny fanahy ity dia mampiavaka ny fomba fiasan'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Izaho dia niasa tamina fampahalalam-baovao mahazatra, Kevin Ryerson, hatramin'ny 2001. Kevin dia mitazona fanahy iray antsoina hoe Ahtun Re, izay nampiseho ny fahafaha-manao ny fiainana lasa amin'ny hasarobidiny.
Ny fampahalalana momba ny fiainana taloha dia voalaza fa nalaina tao amin'ny Akashic Records, andiana banky fahatsiarovana na fitahirizam-bokin'ny tantaran'ny planeta, hita tany amin'ny tontolon'ny fanahy. Peirce dia mamaritra an'i Bobby Jo ho toetra mampientanentana, manana toetra mahafinaritra sy finoana naïve. Bobby Jo dia tsy nahalala na inona na inona momba an'i Penney rehefa nihaona izy ireo, ary tsy nanambara vaovao momba azy koa i Penney tamin'ny fotoam-pivoriana manokana nataon'izy ireo.
Noho ny antony, i Penney dia taitra rehefa namaky ny famakiany i Bobby Jo nanomboka nanakiana ny zava-misy momba ny fiainany taloha toy ny hoe namaky ny rakipahalalana iray.
Fifandraisana ara-panahy: Amin'ny fampahalalana voafaritra manokana, i Penney Peirce dia ampitaina amin'ny Torolalana ho an'ny Fanahy fa izy no Fiorenan'i Charles Parkhurst
Bobby Jo dia nitantara fa tamin'ny vanim-potoana lasa taloha, ny anaran'i Penney dia Charles H. Parkhurst, teraka tamin'ny 17 aprily 1842 tao Framingham, Massachusetts izy dia nipetraka tamin'ny toeram-piompiana ary lasa minisitra malaza. Nankafy ny fiakarana tendrombohitra i Parkhurst ary nampiasa ny polipitra hiadiana amin'ny asan-jiolahy.
Bobby Jo avy eo dia nitatitra fa nanoratra boky maro i Parkhurst, anisan'izany: Ny ilany masin'ny Kristianisma; Ambany kely noho ny anjely; Famakafakana ny Verb Latina natolotr'i Sanskrit; Hanao Ahoana Izao Tontolo Izao Raha Tsy Misy Fivavahana ?; Ny fanekem-pinoan'ny jamba sy ny toriteny hafa; Ny lamina eo an-tendrombohitra; Ny polipitra sy ny Pew; Lahateny ho an'ny zatovolahy; Lahateny ho an'ny zatovovavy; ary ny Efapolo Taonako any New York.
Nilaza tamin'i Penney i Bobby Jo fa maty tamin'ny 8 septambra 1933 i Parkhurst, teo amin'ny faha-91 taonany, ary Bobby Jo avy eo dia nihiaka tamin'ny vatosoa iray hoe: "Ary ry malala, maty nandry an-tafontrano ianao!"
Raha nomena an'ity haavo fampahalalana manokana ity dia nanandrana nanamarina ny fiainana taloha izay nofaritan'i Bobby Jo i Penney. Tamin'ny fanadihadiana nataony dia hitany fa misy firaketana an'i Charles Parkhurst ary ny filazalazan'i Bobby Jo azy dia marina amin'ny antsipiriany rehetra, ao anatin'izany ny lisitr'ireo boky nosoratan'i Parkhurst.
Fampiofanana ao amin'ny vatana teraka amin'ny fanambadiana ary ny toetrany: ny fitoviana eo amin'i Charles Parkhurst sy Penney Peirce
Tsapan'i Penney fa maro ny toetra mampiavaka azy eo amin'i Parkhurst sy ny tenany, ary misy aza fitoviana ara-batana. Tamin'ny fanombanana ity lalao natolotra taloha ity dia naneho i Penney fa tsy nisy fomba nahafahan'i Bobby Jo nitadidy ireo data rehetra momba an'i Parkhurst. Ankoatr'izay, tao Parkhurst, Bobby Jo dia nanondro olona iray manana toetra mampiavaka azy manokana. Naneho taratra i Penney fa tena nahagaga izany, satria tsy fantatr'i Bobby Jo akaiky azy. Ankoatr'izay, ity fivoriana natao tamin'ny taona 1970 ity, ela be talohan'ny nilatsahan'ny Internet. Andeha hodinihintsika ny sasany amin'ireo toetra mahazatra ireo.
Ny fiainana an-tsoratra ny talenta taloha
Voalohany indrindra, i Parkhurst sy Penney dia mizara ny fahasamihafana amin'ny maha mpanoratra azy. Penney, mpanoratra, dia nanolotra talenta fony mbola kely, nahazo ny loka National Scholastic Magazine ho an'ny tantara fohy.
Peirce dia nanana boky telo navoaka, araka ny nomarihina etsy ambony, ary ankoatra izay dia nandray anjara tamin'ny lohateny maromaro hafa toy ny Faminaniana Celestine ary Andraikitra amin'ny fanandramana momba ny asa fitoriana nataon'i Carol Adrienne sy James Redfield; Ny tanjon'ny fiainanao nataon'i Carol Adrienne; Mamaky ny ho avy nataon'i William Kautz; ary Channeling: Ny fifandraisana intuitive, avy amin'i Kautz.
Ho fanampin'ny sangan'asan'ny manam-pahaizana, Parkhurst koa dia nanoratra ho an'ny tanora. Toy izany koa, Penney dia nanoratra boky ho an'ny ankizy hatramin'ny oniversite, nampiditra lohahevitra ara-panahy tao anatin'ireny tantara ireny.
Ny fiainan'ny lasa teo amin'ny lafiny ara-panahy sy ny fanompoana
Parkhurst sy Penney dia liana amin'ny fahalianana ara-panahy sy amin'ny fanomezana asa fanompoana amin'ny alalan'ny ministera. Parkhurst dia nahazo ny diplaoma nahazo diplaoma avy amin'ny Amherst College ary avy eo dia nianatra teolojia tany Halle, Leipzig, ary Bonn. Niverina izy mba hampianatra tao amin'ny Williston Seminary, any Massachusetts, ary lasa lasa Minisitry ny Fiangonana tao Lenox, Massachusetts, izay nandany enin-taona. Lasa mpitandrina tao amin'ny Church Madison Square Presbyterian any New York izy ary nahazo ny Ph.D. ary manam-pahaizana momba ny maha-Andriamanitra (DD) avy amin'ny New York University sy Columbia.
Penney Peirce koa dia nanana fifandraisana akaiky nandritra ny androm-piainany nandritra ny fianarana ara-panahy. Hatramin'ny nahatsiarovany azy dia nilaza i Penney fa "Fa maninona" no teny nanosika ny fihetsiny. Namaky boky momba ny fivavahana eran-tany, fisehoan-javatra ara-tsaina ary filozofia izy. Penney dia nitady ireo fahamarinana fototra voarakitra ao amin'ny fivavahana rehetra ary lasa minisitra manana fahazoan-dàlana vokatr'io fahalianana io. Efa minisitra mpisolo toerana tao amin'ny Unity Church aza izy.
Ny fiainana taloha talenta amin'ny teny latinina
Tahaka an'i Parkhurst, Penny dia manana fiaraha-monina voajanahary amin'ny fiteny fahiny. Parkhurst dia nampianatra teny grika sy latinina ary nanoratra boky iray antsoina hoe Fanadihadiana momba ny Boky latinina notontosain'ny Sanskrit. Peirce dia nandray ny Latin Latina amin'ny ambaratonga faharoa ary nihoatra ny lalao fifaninanana Latinina. Nanana fahalianana ihany koa izy tamin'ny Sanskrit sy egyptiana mpirenireny. Peirce dia nitantara fa nanonofy nofinofisina izy izay nanasongadina ireo teny grika tranainy, ireo teny izay tsy fantany akory tamin'ny fahatsiarovan-tenany.
Fiainana an-tserasera Social Activism: Tammany Hall sy Whistle Blowing
Charles Parkhurst dia nampiasa ny polipitra hialany amin'ny hadisoana ara-tsôsialy sy ara-panahy. Parkhurst dia niaina tao New York City tamin'ny fotoana nahatonga ny kolikoly politika ho olana lehibe. Tammany Hall, ny fitondrana ara-politika izay nitazona fahefana tamin'ny faran'ny 1800, dia nifamotoana tamin'ireo mpiaro ny heloka bevava. Mpisolovava polisy Tammany Hall no nandray kolikoly matetika, raha ny vahoaka kosa no nitazona ny lohany teny amin'ny fasika ary tsy nilaza na inona na inona.
Parkhurst, izay niasa ho Filohan'ny Fikambanana mba hisorohana ny heloka bevava, dia nitory angamba iray amin'ireo toriteny malaza indrindra tamin'ny tantara Amerikana izay nanamelohany ny kolikoly.
Parkhurst dia namaritra ny tanànan'i New York ho "helo misy sarom-baravarana" ary nanao fanamby tamin'ny besinimaro mba hanao zavatra momba izany. Nisy mpanangom-baovao iray tonga teo amin'ny mpijery ary ny vaovao no nahatonga ny vaovao, izay nampientanentana ny sain'ny vahoaka ary fihemoran'ny tompon'andraikitra. Nanafika i Parkhurst ary notantahina hanaporofo ny fiampangany azy. Nanomboka ny fanadihadiany manokana izy ary vetivety dia niseho teo anoloan'ny mpitsara lehibe misy ny zava-misy.
Vokatr'izany, dia nanohy ny asany Lexow Investigation ary ny fifidianana ny governemanta fanavaozana, ny Fitondrana Strong. Ny fanendrena azy Teddy Roosevelt araka ny fanaraha-maso nataon'ny Komisiona Polisy vaovao.
Tahaka an'i Parkhurst, Peirce ihany koa dia manana fironana hanao asa fanasitranana sy fanavaozana. Tao amin'ny gazetin'ny oniversite, Penney dia namoaka lahatsoratra manohitra ny fiovan'ny fizotrany sy ny fandaharam-pianarana izay noheveriny ho tohin'ny mpianatra. Rehefa niasa tamina orinasa lehibe iray izy, dia nanomboka nanao fampielezan-kevitra an-tsoratra mba hampitandremana ireo fomba fanao tsy araka ny tokony ho izy izay hitan'izy ireo tao amin'ny departemantany.
Reincarnation & Fitiavana ny Tany
Charles Parkhurst sy Penney Peirce dia samy nihalehibe tany amin'ny toeram-piompiana ary nizara fitiavana ny fambolena. Parkhurst, tao amin'ny tantaram-piainany, dia nanoratra hoe: "Ny fambolena no fototry ny sivilizasiôna rehetra. Miorina amin'ny sivilizasiôna izy io satria ny vatana manohana ny fanahy. ” (1) Nilaza i Parkhurst fa, "ny fambolena ny tany no zavakanto lehibe voalohany." (2)
Nanomboka nitandrina gazety i Penney tamin'ny faha-fito taonany ary ny ankamaroan'ny aingam-panahiny dia avy tamin'ny natiora sy ny fambolena. Ankoatr'izay, ny loka National Scholastic Magazine izay azony dia ho an'ny tantara fohy momba ny tanimbary any Kansas. Tian'i Penney ihany koa ny "miasa ny tany" ary namboly zaridaina legioma isan-taona hatramin'ny faha-XNUMX taonany.
Ny Fiainan'ny fiainanao taloha
Parkhurst sy Peirce koa dia nizara fitiavana amin'ny fiakarana. Parkhurst dia mpihanika mavitrika, izay nanao vakansy isan-taona tany Alpes, nihanika ny Matterhorn, Weisshorn, ary ny tampony hafa.
Peirce dia naneho fifandraisana akaiky teo amin'ny fiakarana koa. Tamin'ny faha-telo taonany dia nihanika hazo sedera mifanila amin'ny tranony izy ary nijery ny efitrano fandroana faharoa misy ny fianakaviana, izay nametrahan'ny reniny makiazy. Rehefa nijery ivelany ny renin'i Penney ary nahita ny zanany vavy telo taona nanofahofa tanana taminy tamin'ny hazo dia saika tapaka lalan-dra izy!
Ny fahafatesan'ny torimaso natory an'i Charles Parkhurst sy nofy ratsy an'i Penney nianjera
Tamin'ny tranga nahatsiravina, ny fahafatesan'i Parkhurst dia nifandray tamin'ny fitiavany avo. Tamin'ny faha-91 taonany, Parkhurst dia nanana fizaran-torimaso an-tongotra nandehanana teo an-tampon'ny tranony ary nianjera tamin'ny fahafatesany.
Amin'ny lafiny izay toa misy vokany mivaivay amin'ity tranga mampalahelo ity. Mitantara i Penney Peirce fa nandritra ny taona maro dia niaina zava-pisotron-dratsy foana izy tamin'ny familiana ny vatolampy, nianjera tamin'ny ascres, ary nianjera tamin'ny hazo. Tamin'ny faran'ny nofy rehetra, rehefa tsapany fa ho faty izy dia hifoha amin'ny toe-javatra mampalahelo i Peirce.
Rehefa nanao ny fotoam-pivoriany niaraka tamin'i Bobby Jo i Penney ary nahalala fa maty nianjera tamin'ny tampon-trano i Parkhurst, dia nihena ny nofinofiny. Nanana nofinofy farany izy izay nianjera tamin'ny hazo tamin'ny "fihetsiketsehana miadana be", ary nandinika tamim-pahatsorana ireo dingana nodiavin'ny fahafatesan'ny fahalavoana. Taorian'io nofy io dia nijanona tanteraka ny nofy ratsy.
Mino i Penney fa nanana ny sariny izy ireo satria nianjera sy nalahelo i Parkhurst rehefa maty izy, ary tsy mbola voaporofo velively ny zavatra niainany.
Peirce dia mahatsapa ihany koa fa ny fahafatesan'i Parkhurst tamin'ny alàlan'ny torimaso teo am-baravarankely sy ny tafontrano dia mety misy ifandraisany amin'ny faniriany manokana hanitsaka ny toerana avo ka hisidina toy ny vorona Angamba Parkhurst nanana izany faniriana izany ihany koa ary nahita fomba hamelana azy hanidina tamin'io alina nahatsiravina io.
Manamarika ihany i Penney fa hatramin'izao dia mbola misy fanintelony, fa tsy teboka avo, any amin'ny toerana ambony, mankany ambony. Soa ihany, amin'izao fiainana izao i Peirce dia miaina ao amin'ny trano iray misy rihana tokan-trano.
Fifandraisana ara-panahy: Fahavelomana hafa ho an'ny Penney Peirce araka ny nambaran'i Alice Cary
Nandritra ny fotoam-pivoriana niaraka tamin'ny Bobby Jo, dia nolazaina ihany koa i Penney momba ny fahatongavana tamin'ny lasa teo aloha. Nilaza i Bobby Jo fa ny anaran'i Penney nandritra ny androm-piainana dia Alice Cary, izy dia teraka tany amin'ny toeram-piompiana iray tany akaikin'i Cincinnati, Ohio tamin'ny volana 26, 1820 ary maty tamin'ny febroary 12, 1871.
Toy ny tao amin'ny raharaha Parkhurst, Bobby Jo dia nanakiana boky maromaro nosoratan'i Alice Cary, izay ahitana ireto lohateny manaraka ireto: Ireo tononkalon'i Alice sy Phoebe Cary; Clovernook: Fahatsiarovana ny mpiara-monina amintsika any andrefana; Hagar: Tantarao androany; Lyra sy tononkalo hafa; Clovernook Children; Manambady, tsy miray ara-nofo; Zanakavavy nampakarina sy tantara hafa; The Gallery of Josephine; Sarin'ny Fiainana any ambanivohitra; Ballads, Lyrics sy fihirana; Ny Zanak'ilay Eveka, Diary Ilay Zanaka; The Born Thrall; Beringo-biriky: Boky ho an'ny tanora tanora; ary Ballads ho an'ireo vahoaka madinika.
I Bobby Jo indray dia toa nahazo fidirana amin'ny fampahalalana amin'ny antsipirihany momba ny antsipiriany. Bobby Jo dia nilaza tamin'i Penney ihany fa i Alice Cary dia tsy afaka nisaraka tamin'ny zandriny vavy, Phoebe, tamin'io fahavelony io. Bobby Jo dia nitantara fa i Phoebe dia teraka indray tamin'ny naha-zandrin'i Penney an'i Paula.
Tahaka ny tamin'ny raharaha Parkhurst, toa tsy ho vitan'i Bobby Jo ny nitadidy izany rehetra izany momba ny Cary tsy dia mazava loatra, indrindra raha ny fanamarinana ny fampahalalam-baovao dia mampiseho endrika tsy miovaova, endrika toetra ary asa tsy misy porofo.
Ny fahamendrehan'ny fiainana taloha momba an'i Penney Peirce tahaka an'i Alice Cary dia valiana
Toy ny tamin'i Charles Parkhurst taloha, na dia mbola tsy naheno an'i Alice Cary aza i Penney talohan'ny fivoriana niaraka tamin'i Bobby Jo, dia afaka nahita an'i Alice Cary tao amin'ny rakitsoratra tantara izy. Indray mandeha indray, tahaka ny tamin'ny fiainana taloha momba an'i Parkhurst, ny fampahalalana amin'ny antsipiriany rehetra izay nampitain'ny torolalan'ny fanahy tamin'i Penney momba an'i Cary, dia ahitana ny anaram-boninahitra an-tsoratra nosoratan'i Cary, ny daty nahaterahany sy ny datin'ny fahafatesana. Ankoatra izany, ny endriky ny endriky ny sarin'i Cary sy Penney dia tsy miova.
Rahavavy indray no tafaverina amin'ny laoniny
Ny raharaha Alice Cary | Penney Peirce dia maneho fifandraisana karmika izay toa nitohy hatrany amin'ny fiainana iray hafa. Tadidio fa nilaza tamin'i Penney i Bobby Jo fa i Alice Cary dia nanana anabavy antsoina hoe Phoebe ary amin'izao fotoana iainantsika izao dia i Paula, anabavintsika ankehitriny, dia i Penna.
Toa marina ny fanambaran'i Bobby Jo. Fantatr'i Penney fa nanana rahavavy antsoina hoe Phoebe i Alice Cary. Ankoatr'izay, Penney dia afaka nahita ny sarin'i Phoebe, izay ny endrik'izy ireo dia mifanaraka amin'ny an'ny rahavavin'i Penney, Paula. Phoebe dia noheverina ho iray amin'ireo vehivavy marani-tsaina indrindra tany Amerika, nalaza noho ny fahaizany mahita ireo malaso ao anaty glamorous, ary noho ny fahaizany manao parody.
Nandinika i Penney fa mifanaraka amin'i Paula ireo toetrany ireo, izay lazaina ho hafahafa ihany koa, toa an'i Phoebe. Penney dia nanoratra indray androany fa nosoratan'i Paula "fisainana maivana sy mampihetsi-po sy diplomatika." Tena mahira-tsaina toa an'i Phoebe koa i Paula, araka ny nasehony tamin'ny nahazoany diplaoma. Tao anatin'izao fitoviana izao, dia fantatry ny Phoebe fa tsy mety ny manao raharaha an-trano. Amin'izao fotoana iainantsika izao, i Paolya dia manana ny fihenany. I Paula dia mametraka vola an-tsitrapo mba hahafahany mampiasa tolotra maimaim-poana, fa tsy manao raharaha an-trano.
Ny fifandraisana amin'ny fiainana taloha tany Alice sy Phoebe dia nitohy tamin'ny fiainanan'i Penney sy Paula
Misy parabola iray manan-danja hafa koa dia hita ao amin'ny fifandraisana misy eo amin'ireo anabavy Alice, Phoebe sy Penney ary Paula. Ireo anabavy roa ireo dia mitovy ny isa mitovy taona amin'ny vanim-potoana, ary samy manana ny fifandraisana misy eo amin'ny samy izy ireo.
Izao no nosoratan'ny mpikaroka iray momba an'i Alice sy Phoebe Cary: "Ny fifandraisana misy eo amin'ireo anabavy, izay nifampiahy tamin'ny fomba mahavariana indrindra sy ny fako indrindra, dia iray amin'ireo zavatra mahavariana indrindra momba ny fonenany miavaka." (3)
Ny fifamatorana ara-pihetseham-po teo amin'ny anabavy dia tena lehibe, raha ny marina dia niara-maty izy ireo. Taorian'ny nanoloran'i Alice an'i tuberculose, dia nalahelo mafy i Phoebe ka nodimandry enim-bolana taty aoriana. Io fifandraisana akaiky eo amin'ny rahavavy io dia mitohy amin'izao fotoana izao. Peirce dia nanamarika hoe, "Nandritra ny androm-piainako, i Paula zandriko vavy no namako be indrindra."
Ny fifandraisana amin'ny fiainana taloha dia nipoitra tamin'ny anarana Phoebe
Ny fifamatorana teo amin'ireo rahavavy dia navotsotra tany am-piandohana, araka ny filazan'i Penney fa fony i Paula teraka, dia tsy nanana fihetseham-pialonana izy na mpiray tsikombakomba; Naniry ny hanakaiky ny rahavaviny i Penney. Toa teo amin'ny fiainana i Penney dia toa tsy nieritreritra ny hamantatra ny fiainan'ny anabaviny taloha. Mitantara i Penney fa fony mbola tovovavy izy dia fantany ny lisitry ny anarana izay homeny ny zanany indray andro any. Tsara homarihina fa ny anarany tiany indrindra dia i Phoebe, izay nianarany dia midika hoe "mamirapiratra sy mamiratra."
Penney Peirce amin'ny maha-mpitarika ny vehivavy zokiolona azy Alice Cary
Ankoatra ny asa aman-draharahany, Alice Cary dia mpikatroka ara-tsosialy, toy ny Parkhurst sy Penney. I Alice dia nino mafy ny hanafoanana ny fanandevozana sy ny mpanohitra ny zon'ny vehivavy. Izy no filohan'ny fikambanam-behivavy voalohany tany Amerika, Sorority of Sisters (Sorosis), ary namanay tamin'i Jane Croly, Elizabeth Cady Stanton, ary Susan B. Anthony.
Toy izany koa, i Penney dia tafiditra tamin'ny hetsiky ny vehivavy ao New York sy Californie. Izy koa dia lasa talen'ny zavakanto ho an'ny gazetiboky feminista. I Alice Cary dia nankahala ny famoretana na faneriterena amin'ny endrika hafa. Nanomboka fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana i Penney Peirce mba hianatra ny vokatra ateraky ny atidoha ateraky ny fampahalalam-baovao sy ny dokam-barotra amin'ny vahoaka.
Ny fiainana taloha talenta: fitarihana sy fitoviana eo amin'ny finoana ara-panahy an'i Alice Cary sy Penney Peirce
Raha ny ara-panahy dia nifamatotra tamin'ny Fiangonana Universalista i Alice ary nanaiky ny fotopampianarany, anisan'izany ny finoana ny fiverenan'ny vatana vaovao ary ny fanahin'ireo maty dia afaka mifandray amin'ny velona. Nanoratra izy hoe:
"Mahatsiaro, ianao izay tsy mbola nanana
Efa maty ny rainao; nefa aza esorina amiko izany
… Ny nofiko adala:
Mba hahitana an'ireto maso eto an-tany ireto
Izay miseho ivelany amin'ny tany sy ny lanitra,
Manaova faniriana mandrakizay. "(4)
Ny mpahaikon'i Cary dia nanamarika fa liana amin'ny faminaniana koa i Alice. Nilaza ny anabavin'i Alice sy ny namany fa "haveriny amintsika indray ny fahasambarantsika tsirairay, ka handroaka ny horosintsika indray isika amin'ny maraina."
Toy izany koa, i Penney dia nanohy ny fampandrosoana ny psykolojia sy ny fiandohan'ny clairvoyance tany am-piandohan'ny asany. Izy dia nanao ny fiainany ho toy ny matihanina intuitive. Ary koa, Penney dia nanompo ho minisitra mpisolo toerana an'ny Unity Church, izay manana teolojia mitovy amin'izany amin'ny Universalist Church.
Reincarnation & Replication ny talenta fanoratana
Ireo parallèle eo anelanelan'i Cary, Parkhurst sy Peirce dia hita avy amin'ny lisitry ny lohatenim-boky ihany. Ireo telo ireo dia efa nahavita mpanoratra ary telo no nanoratra boky ho an'ny ankizy. Alice Cary dia mpanoratra tononkalo faran'izay manan-danja, ary koa mpanoratra mpanoratra tsy noforonina, tahaka an'i Penney. Ao amin'ny synchronicité mahaliana, nanoratra i Alice Cary teo ambanin'ny anarana hoe "Patty Lee," izay mifanaraka amin'ny rhythm sy ny voalohany avy amin'ny anaran'i Peirce voalohany sy afovoany, "Penney Lee."
Reincarnation & Fitiavana ny natiora
I Alice Cary dia nanana fikarohana vao haingana, ary na dia namaky tamin'ny alina aza ny hazavan'ny horakoraka nirehitra rehefa tsy nisy azy intsony ny labozia. Cary tia ny toetr'andro ary nanoratra betsaka momba ny sehatra avy amin'ny fiainana ambanivohitra.
Manana fitiavana ny natiora ihany koa i Penney, tahaka an'i Parkhurst, ary miaina anaty toeram-pambolena maniry. Nanomboka nitazona diary tamin'ny faha-7 taonany i Penney sy ny ankamaroan'ny fitaomam-panahy avy amin'ny natiora, ny biby ary ny toeram-piompiana. Tahaka an'i Alice Cary, Penney namoaka lahatsoratra sy tononkalo ho an'ny zatovo. Ny loka National Scholastic Magazine dia nandresy izy, tsaroanay, dia natao ho an'ny tantara fohy mikasika ny kanseran'ny Kansas.
Reincarnation & fampiharana ny ara-panahy amin'ny fiainana andavanandro
Ny iray hafa mifanila amin'i Penney dia nahatsikaritra teo anelanelan'ny asa sorany manokana sy ireo an'i Alice Cary sy Charles Parkhurst dia ny hoe samy nifantoka tamin'ny filàna maneho ny soatoavina ara-panahy amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fikasana ary amin'ny alàlan'ny hetsika kely, ary ny fanao, ny fizotrany ary ny zava-dehibe kokoa ny traikefa noho ny miresaka tanjona ambony fotsiny. I Peirce dia nisafidy ireto teny nindramina manaraka ireto tao amin'ny bokin'izy ireo hanehoana an'io hevitra io. Azafady azafady fa ny tenin'i Penney dia nosoratana talohan'ny nahalalany ny fiainany taloha toa an'i Cary sy Parkhurst.
Cary: "Ny tena zava-dehibe dia ny fahatsapana fa tsy ny fanaovana azy, isan'andro isan'andro izay tsy dia tsara loatra." (5)
Parkhurst: "Ny toetra dia ny fiantraikany hiverina amin'ny fitazonana maharitra." (6)
Peirce: "Ny dingana, tsy voatery ho ny valiny, no zavatra masina." (7)
Reincarnation & Prose amin'ny fahamarinana
Nanoratra i Parkhurst: "Ny fahamarinana dia avy amin'ny mandrakizay ary manana ny maha-izy azy amin'ny maha-Andriamanitra azy, fa ny tanjona dia ny fanandramana ny fahamarinana ary tonga sy mandeha amin'ny saina izay mampivelatra izany." (8)
Nanoratra i Peirce tao amin'ny diariny: "Ny hevitra dia ao an-tsainao. Ny fahalalana dia fahamarinana, vokatry ny zavatra niainana mivantana ny maha-olona na ny fanahy. Ny fampahalalana dia zavatra, ny famaritana fotsiny ny fahalalana. "(9)
Nanoratra i Cary hoe: "Fa indraindray, fahamarinana marina sy mangatsiaka ary tsy misy dikany, / Na dia eo amintsika aza dia hanosika ny fahazoana hazavana / Ny kibon'ny kibon'ny zavatra, tahaka ny kintana / avy any an-tampon'ny lanitra manga any an-dranomasina. "(10)
Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny fanomezam-pahasoavana
Parkhurst nanoratra hoe: "Manana fahafaham-po isika mba hahatonga antsika ho faly sy ho velom-pankasitrahana raha toa ka mangina lava isika ka mametraka firaketana am-pitiavana ny famindram-pontsika mahazatra, ary mamela ny fontsika hahatsapa azy ireo sy mifangaro miaraka aminy mandra-pahatonga antsika ho tezitra amin'ny fampiononana ary hifoha amin'ny fitiavana feno ny faharetan'ny mpanome azy. "(11)
Nanoratra i Penney hoe: "Mahaiza mandanjalanja mba hamaritana amin'ny fomba tsotra ny zavatra tsapanao, toy ny hoe mandray solosaina ianao. Rehefa mahatsikaritra zavatra ianao dia mifandray amin'ny tontolo misy anao. Ny "vehivavy" dia mitondra anao ho fahatsapana tombontsoa sy fitsinjarana, ary rehefa mahatsapa izany tanteraka ianao, dia afaka mitomany, na mitobaka amin'ny fiderana, na beam miaraka amin'ny fahatsapana hafanam-po. "(12)
Alice Cary nanoratra hoe: Rehefa mieritreritra ireo fanomezam-pahasoavana izay nanome voninahitra ny foiben'ny fitiavana-, ny fo, ny fanantenana, ny fanahy ary ny vatana, ireo rehetra mety maty dia afaka manome- / Noho ny fitiavana feno fitiavana, / Faly aho, Mihoatra noho izany, mirehareha aho fa velona aho! "(13)
Mariho fa ao amin'ny Anne Frank | Barbro Karlen raharaha momba ny vatana vaovao, dia nisy koa ny fitoviana amin'ny votoatin'ny lahatsoratra navoaka manerana ny fiainana.
Reincarnation & Fanovana ny miralenta: Na eo aza ny lafiny maha-lahy sy maha-vavy an'ny fanahy, ny atiny dia mitoetra ihany
Penney dia nanamarika fa toy ny hoe fifandraisana mahaliana eo amin'i Charles Parkhurst, lehilahy sady manam-pahaizana, ary ny poeta ara-pihetseham-po, Alice Cary. Ao anatin'io asa sorany io, i Penney dia mampifandray ireo singa roa. Mahaliana ny mandinika fa any amin'ny toe-javatra misy ny vatana vaovao any Penney, na dia mety miovaova aza ny fomba amam-pihetseham-po amin'ny fiovana eo amin'ny lahy sy ny vavy, ny hevitra fototra dia mitoetra toy izany koa.
Io trangan-javatra io koa dia hita ao amin'ny tranga vao teraka indray ao amin'ny vovoka Paul Gauguin | Peter Teekamp, rehefa namerina ny hevitra sy ny foto-kevitr'i Peter tamin'ny kanto nataony hatramin'ny fahaveloman'ny Gauguin, fa tamin'ny fomba tsy azo antoka kokoa no nanaovany izany. Izany dia hita miharihary amin'ny fampitahana ny fampitahana an'i Gauguin an'i "Kristy Mavo" sy ny sarin'i Peter, "Fampisehoana an'i Kristy."
Reincarnation & Geographic correspondences in the Lives of Cary, Parkhurst ary Peirce
Misy ihany koa ny fifanoratana jeografia eo amin'ny fiainana telo. Ny mpitsabo ny fiainana taloha dia nanamarika fa ny fanahy matetika dia te-hamerina ny diany, hatramin'ny androm-piainany iray hafa. Izy io dia toy ny hoe nostalgika ny fanahy amin'ny toerana mahazatra sy ny fiainana taloha. Araka izany, hita fa talohan'ny nahatongavan'ny nofo ho nofo dia injenieran'ny fanahy ny làlan'ny fiainana izay hitondra azy any amin'ireo toerana mahazatra azy ireo. Ny fandaminana ny androm-piainana sy ny lahatra dia resahina ao: Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano
Fametraham-pialana ireo toeram-piainana taloha tany Cincinnati sy New York
Ohatra, i Penney dia nianatra tany amin'ny oniversite Cincinnati, any Ohio, kilaometatra vitsivitsy monja avy teo amin'ny toerana nahaterahan'i Alice. Eto, toa an'i Cary, dia nanomboka nanoratra tononkalo tamim-pahavitrihana i Penney. Tany amin'ny oniversite koa dia nanana olon-tiana i Penney izay nanoratra tononkalo ary naka sary ny vehivavy sandoka iray. Ilay sakaizany dia niantso an'io vehivavy io ho toy ny sakafony ary niantso azy hoe "Alice", toy ny hoe nanintona ny fiainany Penney taloha toa an'i Cary izy.
Mahavariana fa nibitsibitsika tamin'ny ankizilahy iray i Alice Cary rehefa nipetraka tany Ohio, izay nanosika azy hiverina tany New York. Manontany tena i Penney raha toa ka ilay lehilahy sakaizan'ny kolejy no mety ho ilay lehilahy iray izay nanaraby an'i Cary.
Rehefa nifindra tany New York i Alice Cary, tsy ela dia nanaraka i Phoebe rahavaviny. Nifindra tany an-tanàna ireo vehivavy ireo ary nikasa ny hivelona tamin'ny literatiora - zavatra tena manahirana tokoa.
Izy ireo dia nanoratra sy namoaka boky poezia sy fiction maro. Tany New York, i Alice sy Phoebe Cary dia fantatra tamin'ny anarana hoe "The Sisters of the West", satria mbola noheverin'i Ohio ho rantsana tandrefana ny Amerika adala tamin'izany fotoana izany.
Ny rahavavin'i Cary dia nanjary tian'ireo manam-pahaizana sy karazana hafa rehefa nampiantrano salon salon malaza iray tao an-tranony nandritra ny dimy ambin'ny folo taona. Ny mpanatrika dia nahitana mpandinika, filozofa, feminista tany am-boalohany, mpanoratra ary olo-malaza tamin'izany fotoana izany, toa an-dry Horace Greeley, Edgar Allan Poe, John Greenleaf Whittier, ary PT Barnum.
Tao amin'ny toa lalana iray nifanindran-dàlana, nandao tampoka an'i Ohio ihany koa i Penney, talohan'ny nahazoany diplaoma tamin'ny oniversite, ary nifindra tany New York City. Tany New York, Penney, toa an'i Alice Cary, dia nifandray tamina vondronà mpanoratra vehivavy sy mpanoratra hafa. Tamin'ny fifanoratana jeografika iray hafa, ny asan'i Penney dia teo akaikin'ny Gramercy Park no misy azy, saingy tsy lavitra ny toerana nonenan'i Alice sy Phoebe Cary. Any New York, ny fiainan'i Charles Parkhurst dia nanjary nifangaro tamin'ny azy ireo koa.
Ny tranoben'i Penny amin'ny West 80th Street dia vato monja avy eo amin'ny toerana nipetrahan'i Charles Parkhurst tamin'ny West 74th. Nanatrika sekoly alina tany amin'ny New York University sy Columbia izy, izay nanatrehan'i Parkhurst ihany koa. Rehefa nandeha ny fotoana dia nifindra tany Park Slope, Brooklyn i Penney, akaikin'ny toerana nandevenana an'i Alice sy Phoebe ao amin'ny Greenem Cemetery.
Ny fametraham-pialana ny fiainana taloha dia mankany Los Angeles sy Framingham, Massachusetts
Tamin'ny lafiny hafa iray hafa, Parkhurst, efa antitra, dia niainga avy tany New York nankany Los Angeles hanambady fanindroany. Toy izany koa, nandao an'i New York City ho any Los Angeles i Penney mba hamita ny mari-pahaizana momba ny famolavolana tao amin'ny California Institute of the Arts. Nanamarika ihany koa izy fa tamin'ny taona taorian'ny fivoriana niarahany tamin'i Bobby Jo dia nifindra tany akaikin'i Framingham, Massachusetts ny ray aman-dreniny, ilay toerana nahaterahana sy tranon'ny fahazazan'i Charles Parkhurst. Tamin'ny fitsidihana ny ray aman-dreniny, Penney dia afaka nitsidika ny kianja fanitsahana taloha an'i Parkhurst.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana
Ny trangan'aretina teraka ao amin'ny vatana vaovao ao amin'i Charles Parkhurst | Penney Peirce sy Alice Cary | Penny Peirce dia mampiseho fisehoan-javatra mahaliana sy manan-danja tokoa, fa ny fanahy iray dia afaka mamelona vatana roa samy hafa miaraka amin'ny fotoana iray. Nantsoiko hoe ity fahatongavan'ny nofo nofo ity, satria hita fa afaka mizara vatana hafa ny fanahy, miaraka amina fotoana iray, ity tranga ity dia nantsoina koa fiainana mitovy.
Alice Cary, izay vao vita batisa tamin'ny androm-piainana, dia teraka tao 1820 ary maty tao amin'ny 1871. Charles Parkhurst dia teraka tao 1842, tamin'ny fotoana nananan'i Alice Cary 22 taona. Maty tamin'ny 1871 i Alice Cary tamin'ny taona 51, tamin'ny fotoana nananan'i Parkhurst 29 taona. Noho izany, ny androm-piainan'i Cary sy Parkhurst dia nihoatra ny 29 taona.
Parkhurst dia maty 52 taona taorian'ny fahafatesan'i Alice Cary, tamin'ny 1933. Teraka i Penney Peirce tamin'ny 1949, 16 taona taorian'ny fahafatesan'i Parkhurst, 50 kilaometatra miala ny toerana nahafatesan'i Parkhurst.
Ian Stevenson, MD izay tena mandresy lahatra ny raharaha momba ny fiainana izay mifamahofaho amin'ny fisarahana dia ny: Ny raharaha momba ny fanambadiana générale avy amin'i Helmut Kohler | Ruprecht Schultz
Nihaona ve i Cary sy Parkhurst?
Mahaliana ny manontany tena raha niampita lalana i Alice Cary sy Charles Parkhurst. Na dia tsy misy porofo manamarina aza fa nifankahita i Cary sy Parkhurst dia hita fa nifanakaiky izy ireo. Tamin'ny 1850, Alice, tamin'ny faha-30 taonany, dia niainga avy tany Ohio mba hitsidika an'i John Greenleaf Whittier tao an-tranony Massachusetts, tsy lavitra ny toerana nipetrahan'i Parkhurst teo amin'ny toeram-pambolen'ny fianakaviany tao Framingham. Parkhurst dia zazalahy 8 taona tamin'izany.
Ireo olona roa ireo dia nanana fizarana fizaran-tany ara-jeografika hafa 20 taona maro taty aoriana, tamin'ny fahavaratry ny 1870 rehefa nanao ny fandrotsahany farany an'i New York City i Alice Cary mba hitsidika ireo namana tany Northampton, Massachusetts. Cary dia 50 taona tamin'izany fotoana izany. Parkhurst, izay efa 28 taona izao, dia nipetraka tany akaikin'i Massachusetts ary nanambady tany Northhampton 8 volana maro taty aoriana.
Parkhurst dia nifindra tany New York tao 1880, sivy taona taorian'ny nahafatesan'i Cary. Na dia toa tsy hitan'ny roa tonta aza izany, dia mety ho fantatr'i Parkhurst momba an'i Cary. Raha mbola tovolahy i Parkhurst, i Cary dia teo am-piheverany ho mpanoratra, ary nandray anjara tamin'ny gazety malaza tamin'izany fotoana izany. Azo atao ny mamaky ireo lahatsoratra nosoratan'i Alice Cary, i Parkhurst.
Fitoviana ara-batana: Ny endriky ny endrika nataon'i Alice Cary, Charles Parkhurst ary ny Penney / principles-of-reincarnationPeirce dia tsy miova.
Ny fiainana taloha talenta: Alice Cary, Charles Parkhurst ary Penney Peirce dia samy namoaka mpanoratra avokoa, izay mifantoka amin'ny ara-panahy.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Alice Cary dia tena akaiky an'i Phoebe rahavaviny, izay toa teraka indray tao amin'ny rahavavin'i Penney, Paula.
Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny fanovan'ny lahy sy ny vavy: Anatin'ireny toe-javatra maro ireny, i Penney dia efa ela niainana fony ialahy, Charles Parkhurst, ary ny fiainany taloha tahaka an'i Alice Cary.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana: Ny fiainan'i Alice Cary sy Charles Parkhurst dia nihoatra ny 29 taona.
Ny Fanahin'ny Fanahy na ny fitarihana ny Fanahy: Ny tantaram-piainan'i Penny Peirce taloha dia naseho tamin'ny fitarihana fanahy nampitaina tamin'ny mpanelanelana amin'ny tontolo.
3. Cyclopedia nasionaly momba ny tantaram-piainan'ny Amerikanina, Vol 1, White and Co., p. 535.
4. Mary Clemmer Ames: Alice sy Phoebe Cary, Hurd sy Houghton, New York, NY, 1873, p. 93.
5. Teny nomen'i Penney Peirce avy amin'ny tranokala Alice Cary, loharano tsy fantatra.
6. Kisary nomen'i Penney Peirce avy amin'ny tranonkala Charles Parkhurst, loharano tsy fantatra.
7. Penney Peirce: The Way intuitive, Ankoatra ny teny famoahana, Hillsboro, OR, 1997, p. 10.
8. Charles H. Parkhurst: Ny efa-polo taona tany New York, p. 230.
9. Penney Peirce, avy amin'ny diariny tsy navoaka.
10. The Repository of the Ladies, Sept. 1855, "Women of America; Ny laharam-pahamehana VI, fampahalalana sasantsasany momba ny Genius of Alice Cary, "editor, Rev. DW Clark.
11. Charles H. Parkhurst, hafatra fisaorana avy amin'ny Dr. Parkhurst, ilay mpitory ny fitiavana ny fitiavan-tanindrazana lehibe indrindra any Amerika, ”Amherst Library.
12. Penney Peirce: Ny lalana midadasika, Ankoatra ny teny famoahana, Hillsboro, OR, 1997, p. 82.
13. Avy amin'ny "God is Love", nataon'i Alice Cary, naverina navoaka: Mary Clemmer Ames, Alice sy Phoebe Cary, p. 263.